VRS SUPERBUG X ကို
မေးခွန်း VRS SUPERBUG X ကို
လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 လ - လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 လ #415 by Colonelwing
VRS SUPERBUG X ကို ,,,
အစဉ်အဆက်ကို Microsoft ပျံသန်းမှု Simulator များအတွက်တီထွင်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်အများဆုံးအသေးစိတ်နှင့်တိကျမှန်ကန်ခြင်း simulation ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Superbug ပြန် FS10 ဖို့ခြိနျးတှေ့လုပျ၏နီးပါး 2004 နှစ်ပေါင်းခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်ပြီး, မကြာခဏထုတ်နှင့်အတူထောက်ခံခံရဖို့ရောက်နေပါတယ်။ ဒါဟာတကလေယာဉ်ပျံရဲ့လျှင်ကိရိယာများအားထံမှလက်နက်စနစ်များကိုမှ, ဒီပုံရိပ်စစ်အတွက်ဖြစ်ကောင်းပဲ! အဆိုပါ Superbug FSX များအတွက်ဒီဇိုင်းကိုပထမဦးဆုံး (နှင့်သာ) စစ်မှန်တဲ့ 3-ဝင်ရိုးယင်ကောင်-by-wire ကိုတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်များသည်။ အဆိုပါလေယာဉ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကတစ်ဦး "ပျံသန်း-by-wire ကို-ကဲ့သို့" CAS မဟုတ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ယောက်-မှီခိုတစ်ခုတည်း (ထုံးစံလွတ်လပ်သော) ကြားနေ-statically-တည်ငြိမ်အခြေစိုက်စခန်းလေယာဉ်မော်ဒယ်ကားမောင်းအချိုးကျစနစ်, တစ်ဦးလုံးဝပြောင်းလဲနေသောပါပဲ။ အဆိုပါ FBW system ကို% ထုံးစံ autopilot နှင့်လေယာဉ်ခရီးစဉ်ညွှန်ကြားရေးမှူးလုပ်ဆောင်ချက်များကို 100 ဖို့ကိုတိုးချဲ့။
သင့်ရဲ့တကယ့်ကိုရှာနေခဲ့လျှင် ကြမ်းပိုး ,, ဤသူသည်သင်တို့ Gentelmen အတွက်ပျံသန်းနှင့်ဂီယာချင်တဦးတည်းပါ!
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်:2နှစ်ပေါင်း 1 တစ်လအကြာအားဖြင့် Colonelwing.
လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 လ - လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 လ #423 by Gh0stRider203
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်:2နှစ်ပေါင်း 1 တစ်လအကြာအားဖြင့် Gh0stRider203.
လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 လ #424 by Colonelwing
Haaaaaa ,, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ပညာရှိတဲ့ကောင်လေး Eh !!!
လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 လ #429 by Gh0stRider203